सामन्ती संस्कार जाेगाउन गरिएका क्रान्ति कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी, यी दुई व्यक्तित्वले कूटनीतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राखे र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन दिएनन् । Share
आखिर किन नाच्छ सिंहदरबारमा फाइल ? Share
बेइजिङ र वासिङ्टनको खेलमैदान बन्नुअघि काठमाडौंले गर्नुपर्ने शक्तिशाली निर्णय Share
एमसीसीले आर्थिक नाकाबन्दीकाे 'डर', अन्याेल हटाउन किन ढिलाई ? Share
प्रचण्डको झुटो प्रतिवेदन, नक्कली स्वीकारोक्ति Share
प्रकृतिको बैँस फर्किने नयाँ वर्षको सँघारमा खेतीपातीका कुरा आफ्नै विशेषताको मौलिक बौद्धिक परम्परालाई उन्नत बनाउने दूरदृष्टि नपुगेर नै यो दुरुह अवस्था भएको हो । यी कुरा बुझ पचाएर गरिने खाना र खेतीपातीका विलापले हाम्रो कृषि अब सप्रिँदैन । 11 min read Share
के सरकारले सूचना बेच्न मिल्छ ? सरकारी कार्यालयको सन्देश कार्टेलिङ गर्न सक्यो भने सञ्चारमाध्यमसँग साखिले हुन पाइन्छ वा अरु स्वार्थहरू पनि राख्न सकिएला । हैन भने किन सन्देशलाई विज्ञापनका रूपमा प्रसारण गर्नुपर्ने ? 12 min read Share
आमाबुबाको किरिया कर्म गर्दैछन् विवाहित छोरी बाँचुञ्जेल सन्तानबाट माया र सम्मान पाए यही धरती, यही जीवन स्वर्ग हो । बाँचुञ्जेल हेला, बेवास्ता अनि अपमान भोगेर नारकीय जीवन जिउन बाध्य भए भने मरेपछिको स्वर्गको के महत्त्व ?9min read Share
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रस्ट पार्नैपर्ने मुद्दा गाउँगाउँमा बिनाकुनै अध्ययन जतासुकै डोजर चलाएको परिणाम विगत वर्षहरूमा ठूलाठूला पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिलाई बिर्सने गल्ती गर्न हुँदैन । देशका धेरै भूभागका सडक हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षायाममा हिलाम्मे अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । 10 min read Share
कसरी फैलिन्छ मिथ्या सूचना, जिम्मेवार को ? राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो फाइदाका लागि बारम्बार झुटो बोल्ने गर्छन् । त्यसले कुनै व्यक्तिको मिथ्या पहिचान बनिरहेको हुन्छ र त्यसको असर हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा देखिने जोखिम हुन्छ ।5min read Share
विवेकशील साझाकाे विवाद सुल्झाउन निर्देश सिलवालका ११ सुझाव देखावटी समाजमा प्रायः कस्मेटिक व्यक्तिहरूले महलमा बसेर गरिबीको गीत गाउने रहेछन् । हामी कोही पनि दोगलापनको सिकार हुनु हुँदैन 18 min read Share
अहिलेकाे शासन र निर्वाचन प्रणाली फेल भइसक्याे, परिवर्तन गरौँ बितेका यी ३५० वर्षमा मानव समाजले जे–जति विकास गरेको छ, सम्भवतः यो अवधिभन्दा पूर्वको सिङ्गै कालमा गरिएका विकाससँग तुलना गर्दा यसले बराबरीको दर्जा हासिल गर्न अवश्य पनि सक्दैन । सिङ्गै तीनवटा युगहरूमा भन्दा बढी उपलब्धिहरू आजको युगमा प्राप्त गरेको छ । 15 min read Share
शिक्षाको तीव्र निजीकरण नरोके अझै कठिन दिनहरू आउँछन् भएकै शैक्षिक नीतिको क्रमिक सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सके शिक्षाको व्यापारमा कमी आउनेछ । 12 min read Share
उद्यमशीलतामा आधारित शिक्षाले दिने समृद्धि विद्यार्थीले मास्टर्स सकेको सर्टिफिकेट बोकेर बजार जान्छ । तर, त्यो सर्टिफिकेट बिक्दैन भने जीवनका २५ वर्ष शिक्षाका नाममा गरिएको लगानीको अर्थ के ?9min read Share
आधा सत्ता महिलाको हातमा दिऊँ शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड बनाइरहेका छन् । तिनीहरूको सत्ता यति निरंकुश छ कि सम्पूर्ण साधनस्रोत खर्च गरेर आफ्नो सत्ता जोगाइरहेका छन् । अहिलेको यो संरचना पूर्ण रूपमा भत्काउनुपर्छ र महिलाको ५० प्रतिशत पार्टीसत्ता कायम गरिनुपर्छ । 17 min read Share
यौन हिंसा पुराणकालदेखि आजसम्म हिन्दु धर्ममा मात्र होइन, हाम्रो समाजमा प्रचलित अन्य धर्महरूमा पनि महिलाहरूप्रति गरिने यौन हिंसा र बलात्कारका लागि धार्मिक कानुुनअनुसार महिलाहरूलाई नै प्रताडित गरिन्छ ।7min read Share
चुनावको सरगर्मी छ, युवा उम्मेदवारको किन चर्चा नगर्ने ? निरन्तरता, इतिहास र अनुभवलाई देखाएर फेरि एकपटक युवा पुस्तालाई बाइपास गर्न सक्ने विषयलाई कडा निगरानीमा राखौँ । संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनमा नायक युवाहरूलाई राजकीय व्यवस्थापनमा अयोग्य देखाउने परम्पागत प्रवृत्तिविरुद्ध एकताबद्ध र सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप जरुरी छ 10 min read Share
मोहन वैद्यको चुनाव बहिष्कार र साना कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य मुद्दा मिल्ने मुद्दामा संघर्ष उठान गर्ने र तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसबाट भागेर साना राजनीतिक पार्टीले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्दैनन् । 14 min read Share
के पाक्छ सिंहदरबारका ‘गोप्य’ कोठामा ? बिचौलियाका प्रियहरू प्राय: ‘गोप्य’ कोठामा भेटिन्छन् । जनताका सेवकहरू त खुल्ला हुनुपर्ने हैन र ? किन सटाकसुटुक गर्नुपर्छ ? किन एकान्त रोज्नुपर्छ ? कुनै स्वार्थ छैन भने किन गोप्य चाहिन्छ ? हैन भने किन लुकाएर भेट्नु, किन लुकेर काम गर्नु ? 12 min read Share
एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा जनता झुक्याउने जालसाजी व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीले पठाएको जवाफलाई सम्पादन गरिएको मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । यसो गर्नु भनेको सरासर जनता झुक्याउने जालसाजीबाहेक अरु केही होइन 12 min read Share
टिकट हाम्रालाई कि राम्रालाई ? नयाँ पुस्ता, नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैलीसहितको उम्मेदवार चुनावी मैदानमा आयो भने मतदाताले ऊ कुन पार्टीको हो भनेर नहेर्न पनि सक्छन् । 18 min read Share
आयातीत समाजवाद होइन, अब रैथाने समाजवाद आयातीत समाजवादले रैथाने समाजवाद कुनै पनि अर्थमा फस्टाउन दिँदैन । किनकि राजनीतिको निकम्मा र अक्षम पुस्ता यही आयातीत समाजवाद भजाएर गुजारा गर्न सम्भव सबै दाउपेचमा लागिरहनेछ । 10 min read Share
युक्रेनमा युद्ध चल्दैछ, खासमा त्याे राेमान्टिक प्रेमीहरूकाे देश हाे प्रेमको सुरुङ नाम दिइएको उत्तरी पश्चिम युक्रेनको क्लाभेनमा अवस्थित रेलवे लाइन संसारकै सबैभन्दा रोमान्टिक स्थानको रूपमा लिइन्छ । करिब साढे ६ किलोमिटर लामो रेलवे लिकका सबै भागमा घना जङ्गलले घेरिएको छ । यसले धेरै जोडीहरूलाई त्यहाँ जान आकर्षित गर्छ । 13 min read Share
जनकपुरमा एक अनामको विद्वत् प्रवचन यहाँ पार्टी छन्, परिपाटी छैन । सरकार छ, सुशासन छैन । संविधान र कानुन छन्, न्याय छैन । बहालवाला अधिकारी छन्, जिम्मेवारीबोध छैन । यस्तो अवस्थामा रुपान्तरणको आरम्भ कहाँबाट हुने हो ? 12 min read Share